Voadika ny 24 Mey 2022 12:00 GMT
Tsy misy fetra ara-jeografika takiana amin'ity toerana ity. Mariho fa tsy manana birao na foibe hita vatana ny Global Voices. Tsy maintsy mahay mandrindra tsara ny fametrahana ny fandaharam-potoanany manokana ny mpifaninana ary miasa amin'ny tontolo virtoaly manontolo ary vonona hanao dia iraisampirenena.
Raisinay an-tanandroa ireo kandidà avy any ivelan'i Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana ary ampirisihana ireo olona mandray anjara amin'ny tetikasa Global Voices mba handray anjara.
Alefaso mailaka amin'ny teny Anglisy amin'ny jobs@globalvoices.org ny fehin'ny lalana nodiavinao sy ny filazalazana ny fahavononanao, izay manasongadina ny asanao ary hazavao ny antony hiheveranao fa ianao no ilay kandida mety indrindra ho an'ny Global Voices, asio lohateny: Advox Project researcher: [ny anaranao]. Ny fe-potoana fangatahana farany dia amin'ny 11:59pm ET (GMT -5) amin'ny 31 mey 2022.